"Poverty as a Marketing Opportunity, Halkii Bulshada Dhibaatada"
"Saboolnimada sida Opportunity Suuq a, Halkii Dhibaatada Social "
MOWDUUCYADA:Saboolnimada sida Opportunity Suuq-aPuzzle4Prize.com
Posted By: May Anokuru December 11, 2013
Waxaan soo qeybo ka mid ah version si taxane ah oo ku saabsan gabal on hoose ee Pyramid ah (BoP) Ra'yiga saboolnimada yaraynta. Waxaan ka heli fikradda ah arrin xiiso. Waxaan la yaaban ahay sababta Nigeria muuqataa luxo ee ay codsiga, ka duwan waxa hesha in qaybo badan oo kale oo dunida ah. Fadlan, sida Galliani ah in suuq-, fadlan 'furo indhahayga' oo dheeraad ah si saboolnimada fursad marketing dhibaato halkii ay bulshada - Joe Nnabuife.
Sida aan u sameeyey cad in maskaxda cajiib at caleema dhawaan "Puzzle4Prize.com'', ah madal horumarinta marketing online isticmaala xujooyinka, sida optimist ah waxaan jeclahay si aad u eegto arrimaha ka eego dhinaca of a 'dhalooyinka nus-buuxa ah' halkii ay u janjeera ee defeatist dhigaya u arkaysid muraayad la mid ah sida 'bar madhan'. Tani waxay u muuqataa baanaha ee dalal badan oo soo koraya, iyadoo doorashada for dusin u yihiin ilaalinta gacanta ku xigeenka sida ku hab 'dawarsanayay baaquli' in yareeynta saboolnimada a - Aragtida saboolnimada isagoo dhibaato bulsho halkii fursadaha soo jireenka ah ee isagoo miskiin, marka laga eego marketing a. Sida fikradda ah, this runtii waa waxa "Suuq masaakiinta" ama hooseysa Pyramid ah (BoP) marketing waa dhan oo ku saabsan.
C.K. Prahalad, aqoonyahan ah; Galliani maamulka a, kaalinta sida mid ka mid ah aqoon yahanno ganacsiga ugu caansan adduunka; iyo jibbaarada ah ee habkan (dadka kale qaar ka mid ah) tiirisay in, "... Haddii aan joojiyo fikirka masaakiinta sida dhibanayaasha ama Sida rar, iyo bilaabaan iyaga garashada sida ganacsi iyo macaamiisha qiimaha-miyir qabo adkeysi iyo hal abuur leh, dunida oo dhan fursad u furnaan doonaa ". BoP waa model ah oo wax ganacsi ah in si ula kac ah diirada masaakiinta, inta badan codsanaya teknoolajiyada cusub. Sababo of Furuujtooda qaar door bidaan in ay tixraac fikradda la mid ah sida "Base ee Pyramid ah".
Waayo, xoogga, BoP (sidoo kale "Si ay masaakiinta Suuq" tagged, "Suuqa masaakiinta" ama M4P) waa model ah oo wax ganacsi ah in si ula kac ah diirada masaakiinta. Waxa weeyaan hab suuq halkaas ka jira suuq masaakiinta, gudahood oo masaakiinta ka shaqeeya si ay u helaan nolol iyo ma sugi deeqaha ay ka hesho ilaha wax kasta oo. Khilaafka of this weli horumar ah ee badan ee saboolka ah iyada oo loo marayo xoojinta dhab booskiisa dhaqaalaha (iyadoo la abuurayo fursado si kor loogu qaado dakhliga iyo hagaajiyo nolasha uu), halkii qoraaladan ka dhaqdhaqaajinta bani'aadamnimada. Hadalkaasu jir, "Joojiyo i siiyo kalluunka, laakiin i barto sida loo kalluumaysto halkii "si adag halkan hesha.
Dhawaan ayaa ku dhawaaqay Ururka dowladda ee Bayelsa State si loo yareeyo faqriga iyadoo loo marayo 'Community Based Mashaariicda' waa in tusmo oo habkani, oo waa in lagu kudayasho. Madaxweynaha la soo dhaafay degdeg ah Brazil ee, Luiz Inacio Lula da Silva, gaari taam weyn oo keeni malaayiin Brazil ka saarto faqriga iyo beddeli miyigii miyiga magaalooyinka ee dalka. Waxaan sii doode carruur ah ee fikirka Madaxweyne Lula ayaa.
My 11 taxane qayb on BoP (kaas oo laga heli kari lahaa oo lacag la'aan ah, on codsi) waxaa jira sida alaabta muusikada oo ku boorriyay maamulka la xiriira ee Nigeria in iftiinka u arkaan by galo yareeynta saboolnimada iyada oo loo marayo hab this. Sida maldahan, tusaale u ah isku biimeynta ah qaar ka mid ah dalalka kale ee soo koraya meesha BoP samaynayo masaakiintana sababta inay Ilaah ugu mahad naqayaa, waayo, iyaga isbaray, markaan saboolnimada waxaa lagu sheegay ka dib in this u qortaa-up.
hoose ee Ahraamta sidii erey ee dhaqaalaha waa si fiican u yaqaan. Waxay muujinaysaa ugu weyn, laakiin ugu saboolsan, group-dhaqaale (iyadoo dhowr ah aad buu hodan u ah ee Cardiff ee Ahraamta this). In erayadii Prahalad iyo kuwa kale, hoose ee ka kooban oo ka mid ah 4 billion oo qof (in muddo caalamka) in ku nool yihiin wax ka yar $2 maalin kasta. Uu suuq u muuqataa in marka masaakiinta (suuqa weyn) waxaa beddelay soo saarayaasha iyo sidoo kale macaamiisha, waxay heli dheeraad ah si ay wax soo saarka iyo adeegyada ay helaan taas oo ka caawin iyaga u bartaan sharafta dareenka iyo doorashooyin ka ganacsiga gaarka loo leeyahay. Accessible, suuqyada hufan iyo remunerative waa lagama maarmaan si ay u kordhiyaan dakhliga ka, wanaajiyo-nololeedka ah gaar ahaan masaakiinta miyiga.
Saboolnimada waa gobol ka mid ah, kuwaas oo ka maqan xaddi gaar ah oo hanti ama lacag wax. saboolnimada Absolute ama caydh noqoto hab loo diiday, baahida aadanaha ee aasaasiga ah, taas oo caadi ahaan waxaa ka mid ah cuntada, biyaha, fayadhowrka, dharka, hoy, daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada. saboolnimada Qaraabo waa xaallad lagu qeexaa sida sinnaan la'aanta dhaqaale ee goobta ama bulshada taas oo dadka ku nool. In Nigeria, saboolnimada Soha oo taag at wejigayagii inkastoo wax badan ku tilmaamay koritaanka sare dhaqaalaha.
In kasta oo ay Nigeria isagoo mid ka mid ah heerarka koritaanka dhaqaale ee ugu badan dunida ee (celcelis 7.4 boqolkiiba tobankii sano ee la soo dhaafay), waxa xajisto heer sare ah saboolnimada, sida laga soo xigtay Baanka Adduunka, la 67 boqolkiiba muwaadiniinteeda ku nool on hoose $1 maalin kasta. Bureau of National Statistics Xataa halkaas-dawladdu leedahay (NBS) dhawaan xaqiijiyay in 112 million Nigeria noolaa hoose line saboolnimada, Bangiga Adduunka aan la madax taagan erayada ku saabsan tirada Nigeria ku nool saboolnimada isagoo on korodhka degdeg ah aad u. In ka badan 80 milyan oo Nigeria ku nool yihiin dhulka miyiga ah, iyadoo intooda cad oo lagu tilmaamay sida masaakiin. Iyadoo ay taasi jirto, waxa wali cad in dadaalada dawladaha kala duwan ee dalka Nigeria 'at yareeynta saboolnimada aan la dhalaya natiijada cajiib ah. Maxaa ka mid ah oo naga mid ah oo ku saabsan fiiro mararka qaar waa in dad badan oo ku wareegsan waa kuwo jaahil ka ah xaqiiqda ah in tiro badan oo ah dadka saboolka ah ka samaysan suuqa weyn, iyo fursad afka-waraabiyo suuq ah.
Anigu waxaan ahay arrin ka war dookha dega gudahood deegaanka shirkadaha of this clime, arrimaha la xiriira faqriga lagu soo dhawaaday sidii dhibaatooyinka bulsho ee ka badan sida fursadaha suuqgaynta. (Si aad u la sii wadi).
"Saboolnimada sida Opportunity Suuq a, Halkii Dhibaatada Social " (2)
Be the first to comment on ""Saboolnimada sida Opportunity Suuq a, Halkii Dhibaatada Social ""